नेपाली मूलकी भारतीय टिकटक स्टारको अश्लील भिडियो यसरी बाहिरियो ! - Sagarmatha Online News Portal
नेपाली मूलकी भारतीय टिकटक स्टारको अश्लील भिडियो यसरी बाहिरियो !
एजेन्सी । नेपाली मूलकी भारतीय टिकटक नम्बर वान स्टार निशा गुरागाईको अश्लील भिडियो बाहिरिएपछि भाइरल भएको छ । आफ्नै ब्वाईफ्रेण्डसँग यौन सम्पर्क गरिरहेको भिडियो बाहिरिएपछि उनी केहि दिन तनाव भएको बताएकी छिन् ।
शुरुमा उनले आफ्नो भिडियो स्वीकार नगरेपनि युट्युब च्यानल मार्फत भिडियो सन्देश दिँदै निशाले विश्वभर उक्त भिडियो शेयर गरेर भाइरल बनाईदिन समेत भनेकी छिन् । उत्त भिडियो सन्देशमा आफू नेपाली भएकोमा गर्व लागेको बताएकी छिन् । व्यत्तिगत मनोरञ्जनका लागि कैद गरिएको भिडियो मोबाईलमै भए पनि ह्याकरहरुले कुनै एपको प्रयोग गरी उक्त भिडियो लिक गरिदिएको समेत बताएकी छिन् ।
उनको मुहारमा कुनै पश्चातापको झल्को देखिदैन । हसिलो मुहारमा उनले अर्को दोस्रो अश्लील भिडियो समेत सार्वजनिक गर्ने बताएकी छिन् । ‘नआउनु सामाजिक सञ्जालमा आईहाल्यो अब त मलाई कुनै चिन्ता छैन,’ उनले भनिन्, ‘यो मेरो भिडियोलाई सबैले हेरेर भाईरल बनाई दिनुस ।’
केहि दिनअघि उनले भाइरल भैरहेको भिडियोलाई रोकिपाउँ भनि प्रहरीमा उजुरी समेत दिएकी थिईन् । तर पछिल्लो दिनमा उनी आफैले धेरैभन्दा धेरै शेयर गरे पनि आफूलाई कुनै फरक नपर्ने एक भिडियो सन्देशमा बताएकी छिन् ।
पछिल्लो समय विकसित भएका विभिन्न एपहरुले आम मानिसलाई सजिलो त बनाएको छ नै उनीहरुको गोपनीयता पनि असुरक्षित बनाई दिएको छ । झनै विभिन्न ह्याकरहरुले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएकाहरुको खोजीखोजी एकाउण्ट ह्याक गरी उनीहरुको गोप्य भिडियो, अडियो र तस्वीहरु लिक गर्दै आएका छन् । स्मार्ट प्रविधिसँगै देखिएको यस्ता समस्याले पछिल्लो समय सबैलाई चिन्तित बनाएको छ ।
नेपाली मूलकी भारतीय नागरिक टिकटक स्टार निशा गुरागाई ।